देशको अर्थतन्त्रको आकार मापनको आधार वर्ष परिवर्तन गरिने – KhabarKhurak
देशको अर्थतन्त्रको आकार मापनको आधार वर्ष परिवर्तन गरिने
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । देशको अर्थतन्त्रको आकार मापनको आधार वर्ष परिवर्तन गरिने भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका लागि हाल कायम गरिएको आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ को आधारमा अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार आउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आधार वर्ष फेर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको हो । अहिलेको आधार वर्ष अलि पुरानो भएको र त्यसले अर्थतन्त्रका सबै विषय समेट्न नसकेकोले परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गोरखापत्रलाई बताउनुभयो ।
हाल कायम आधार वर्षलाई परिवर्तन गरेर कुनै साधारण वर्षलाई आधार मान्ने दिशातर्फ छलफल भइरहेको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक बर्ष २०६७÷६८ अथवा यस्तै साधारण वर्षलाई आधार वर्ष बनाउने कि भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रमा विकसित पछिल्ला उपलब्धिलाई समेट्ने गरी आधार वर्ष तयार हुने उहाँले बताउनुभयो ।
केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले अहिले २०५७÷५८ लाई आधार वर्ष मानेर देशको समग्र अर्थतन्त्रको विभिन्न सूचकहरू तयार गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ आधार वर्ष तय गरेर सूचकाङ्क तयार गर्ने विषयमा विभागलाई आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । तथ्याङ्क विभागले पछिल्लो पटक प्रदेशस्तरमा गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कका लागि पनि २०५७÷५८ लाई नै आधार वर्ष मानेको थियो । आधार वर्षकै आधारमा विभागले आर्थिक वृद्धिदरलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सूचकको तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गर्छ ।
आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने विषयमा अहिले केही काम अगाडि बढिसकेको विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । बढीमा दुई तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
आव २०६७÷६८ लाई आधार वर्षभन्दा त्यसयताका सबै आर्थिक वर्षको जीडीपी मूल्याङ्कन पनि गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसो गर्दा अहिलेको जीडीपीको आकार पनि सामान्य भए पनि बढ्ने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अहिलेको करिब ३५÷३६ खर्ब हाराहारीको जीडीपी नयाँ आधार वर्ष
कायम गरेपछि बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
विभागले आधार वर्ष तयार गर्दा अहिले अर्थतन्त्रलाई १७ वटा भागमा वर्गीकरण गरेकोमा अब भने २१ वटा भागमा वर्गीकरण गर्नेछ । खासगरी यातायात, सेवा क्षेत्र, सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषय अबको सूचकमा थप गर्ने तयारी छ ।
विभागले अहिले सन् १९९३ को सिस्टम अपरेसन एकाउन्टमार्फत यस्ता सूचकाङ्क अद्यावधिक गर्दै आएको छ । अब भने सन् २००८ मा परिष्कृत प्रणाली प्रयोग हुने विभागले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका छन् ।
Tags: # जीडीपी
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्योः प्रेटोलमा ५ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य २-२ रुपैयाँले बढ्यो
सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो, कति छ बजारमा आजकाे मुल्य ?
सलह समातेर ल्याउनुस प्रति केजि २० रुपैयाँ लैजानुस : प्रदेश ५ सरकार
दुई अर्ब एक करोड बुटवल उपमहानगरको बजेटः कृषि, खाद्य सुरक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता
तेह्र दिनकी सुत्केरी महिलाको दुवै मिर्गौला फेल, नवजात शिशुको बिचल्ली
१४ वर्षीया बालिकालाई भगाएर विवाह गरेको आरोपमा एक किशोर पक्राउ
नेकपाको सचिवालय बैठक सरेको सर्‍यै